Iomi Ọdịnaya Adịghị Mma | Martech Zone
Iomi Ọdịnaya Adịghị Mma
Mbụ m disclaimer: Abụ m ọbụghị ọka iwu. Ebe m abughi onye ọka iwu, aga m ede post a dika echiche. Na LinkedIn, a mkparịta ụka malitere site n'ajụjụ na-esonụ:
Ọ bụ iwu itinye akwụkwọ na ọdịnaya ndị ọzọ na achọtara m ihe ọmụma na blọọgụ m (n'ezie na-enye otuto n'aka onye edemede) ma ọ bụ na m ga-agwa onye edemede akwụkwọ mbụ first
Enwere azịza mara mma dị mfe na nke a mana enwere m obi nkoropụ na nzaghachi nke ndị mmadụ na mkparịta ụka ahụ. Ihe ka n'ọnụ ọgụgụ n'ime ndị mmadụ ji ndụmọdụ dị, n'ezie, zaghachi iwu iji zipu akụkọ ma ọ bụ ọdịnaya ha chọtara ihe ọmụma na blọọgụ ha. Denye ederede? ọdịnaya? Enweghị ikike? You bụ mkpụrụ?
Arụmụka iwu na-aga n'ihu na ihe bụ ezigbo ojiji yana oke ikike nwebisiinka na-echebe ụlọ ọrụ ma ọ bụ onye ọ bụla ma ọ bụrụ na ọdịnaya gị hụrụ na saịtị ọzọ. Dịka onye na-ede ụda ọdịnaya, enwere m ike ịgwa gị na ọ dị njọ. Ekwughi m na ọ bụ iwu na-akwadoghị… M kwuru na ọ bụ ezighị ezi.
N'ụzọ dị ịtụnanya, Ntdị na-enye m ọnụ ọgụgụ na a na-e isomi ọdịnaya m ihe karịrị 100 ugboro n'ụbọchị site n'aka ndị ọbịa. 100 ugboro n'ụbọchị !!! A na-ekesa ọdịnaya ahụ mgbe niile site na email… mana ụfọdụ n'ime ya na-eme ka ọ banye na saịtị ndị ọzọ. Offọdụ n'ime ọdịnaya bụ koodu nlele - ma eleghị anya na-eme ya ka ọ bụrụ ọrụ ntanetị.
Ọ bụ m n’onwe m na-ezipụ ọdịnaya? Ee… mana iji ikike ma ọ bụ site n’ịgbaso usoro iwu saịtị ahụ nke mebere ọdịnaya. Biko mara na ekwughi m Attribution. Tụfu azụlinklink na ọdịnaya nke iziputara agaghị abụ ikike… a ga-enyerịrị gị ikike. M na-enwetakarị ụlọ ọrụ teknụzụ azụmaahịa dọrọ m n'elu ikpo okwu ha ma ọ bụ ngwanrọ ha… kama ịrụ ọrụ siri ike nke ide nyocha zuru oke, m na-ajụkarị ha maka isi ihe ha ga-achọ itinye ya na post. Ha na enye ha… ikike ekwuputara ibiputa ha.
Na mpụga nke nwebisiinka, m na-ehie ụzọ n'akụkụ tinye n'ọrụ Creative Commons. Creative Commons na-akọwapụta nke ọma ma arụ ọrụ na saịtị ahụ enwere ike i beomi ya naanị na enweghị njiri mara, ma ọ bụ na ọ chọrọ ikike ọzọ.
N'oge nke azụmahịa ọ bụla na-aghọ onye mbipụta ọdịnaya, ọnwụnwa idetuo na mado post yana ọdịnaya onye ọzọ siri ike. Otú ọ dị, ọ bụ ihe dị ize ndụ, nke ahụ na-adịwanye njọ kwa ụbọchị (jụọ ndị na-ede blọgụ na ha ga-agba akwụkwọ Kwesịrị ekwesị). N'agbanyeghị agbanyeghị iwu ndị ahụ dị ire ma ọ bụ na ha adabaghịla… na-adọtpụrụ gị n'ụlọ ikpe yana ịnwe onye ọka iwu ịchebe gị bụ ihe na-ewe oge ma dị oke ọnụ.
Zere ya site na ide ederede nke aka gị. Ọ bụghị naanị ihe dị mma ịme, ọ bụkwa ihe dị mma ịme. Anyị etinyewo oge na mgbalị dị ukwuu iji mepee saịtị anyị (dị ka ọtụtụ ụlọ ọrụ). Inwe ọdịnaya gị buliri ma gosipụta gị na saịtị ndị ọzọ… na-adọta ma nlebara anya ma mgbe ụfọdụ ọbụna ego… dị nnọọ jụụ.
Image: Bart Simpson Chalkboard Foto ndị dị na - Pictures
Ajụjụ na Azịza: inchọgharị azụmaahịa azụmaahịa
Jun 9, 2011 na 4:45 AM
Dude ị bụ onye ziri ezi na iwu niile na ezighi ezi. Ọ bụghị eziokwu na ọ bụ iwu na-akwadoghị n'ụfọdụ. Agụla ụfọdụ ebe na 10 ruo 20% dị mma na njikọ akwụmụgwọ, yana ha niile dabere na gburugburu ya. Satire, "collages" na ụdị ihe ndị ọzọ na-enweta obere omume.
Mana ekwesịrị m ịsị na ikike dị naanị mkpa ma ọ bụrụ na ị "na-edegharị" ihe niile ma ọ bụ akụkụ buru ibu na ya.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na m na-ede otu na soshal midia m chọrọ ihota gị, Douglas Karr na ọkwa m bụ okwu 600 - 1200 maka exmple… na achọrọ m iji nkwuputa sitere na otu post gị, m ga-eji ọnụego wee nye njide na-enweghị ịrịọ maka ikike.
Ka emechara ị biputere ya na ntanetị ma dị otua ị bụ “ọhaneze” ma ọ bụrụ na m ga-arịọ maka ikike n’aka onye ọ bụla m kwuru, mgbe ahụ izipu ihe ga - abụ ihe na - agaghị ekwe omume - ụfọdụ ndị ga - ewe ụbọchị, izu ma ọ bụ ghara ịzaghachi. Ma rịba ama akụkụ banyere ọnụ ọgụgụ okwu… A see okwu ga-abụ ahịrịokwu 1… 2 max n'ihi ya, ọ ga-abụ naanị 1 ahịrịokwu ma eleghị anya 100 - 200 ahịrịokwu.
na… abughi m onye oka iwu ma obu ihe obula ya mere na nke a bu ihe m kwuru.
Jun 9, 2011 na 10:12 AM
O zighi ezi ime mashi OPC (ọdịnaya ndị ọzọ). Ọ bụ akụ ọgụgụ isi ma ọ bụ echiche echekwara. Ọ bụghị naanị okwu. Nope…
Jun 9, 2011 na 2: 29 PM
Ekwenyere m. Karịsịa mgbe ebe nrụọrụ weebụ mashup, ma ọ bụ isiokwu na-abụkarị mashups.
Jun 12, 2011 na 10: 32 PM
Olee otú obi dị gị banyere ihe e dere ede? M na-adọta paragraf na blọọgụ m na-achọta na-adọrọ mmasị ma ọ bụ na-akpali akpali dị ka ntọala maka isiokwu ọhụrụ. Ana m agunye njikọ azụ na akwụmụgwọ mgbe niile.
Jun 13, 2011 na 7: 16 PM
Ọ bụghị otú m chere banyere ha, Lorraine… ọ bụ otú onye nwe saịtị si ele. Ihe odide ka na-e copomi ọdịnaya - o nweghi ihe o mere. Ndị na-ekwu okwu ga-asị na ihe edere bụ 'ihe ziri ezi' ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe dịka ịkụziri ndị ọzọ. Agbanyeghị, ndị anyị nwere blọọgụ nke na-ewulite akara anyị na azụmaahịa anyị na-erite uru site na mkpụrụokwu ndị ahụ. Ọ bụrụgodi na nke ahụ abụghị eziokwu, ị ga-ahụ onwe gị na a ga-agba gị akwụkwọ.
Jun 13, 2011 na 8: 14 PM
Echere m na ihe ederede bụ ihe ziri ezi mgbe niile. Ihe bụ nsogbu bụ na ndị mmadụ na-eji ma na-emegbu echiche ahụ dum banyere iji ihe ziri ezi eme ihe. Ajuju banyere ihe edeputara bu otu anyi si akowa ya bu ihe di nkpa n’ebe a.
A na-akọwapụta ọfụma n'ụzọ doro anya ma ị ga-agụ ihe ojiji ziri ezi na-ekwu na ọ bụ. A kọwara ya nke ọma: http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_use
Enwere ụzọ dị iche iche onye nwe saịtị nwere ike isi nye ihe edepụtara, ọ bụrụ na onye edemede edee na site na nri ha dịka ọmụmaatụ, a ghọtara na nke a bụ * edemede * ọ bụghị anyị ka ndị na - ede blọgụ “họrọ ma họrọ” Kedu paragraf anyị chọrọ iji dị ka ihe kwuru.
Ọ bụrụ na akọwabeghị ihe, mgbe ahụ echere m na ọ dị mma iji see okwu sitere na edemede iji nye ederede na ederede gị na iji nye njikọ. Naanị jide n'aka na edemede gị bụ nke izizi na ntinye / edemede bụ naanị ebe ahụ iji kwuo okwu ma ọ bụ kwuo mmadụ. Ọ ga-abụrịrị obere akụkụ nke edemede ahụ ka ọ ghara ịghagharị ma ọ bụ weghachite ya, mana ọ ga-adaba na nchịkọta akụkọ, nkatọ, ịkwa emo na ndị masịrị ya.
Ọ na-alọghachi na ọnụọgụ nke okwu a na-eji site na isiokwu mbụ yana ole ị na-ede ka ị na-etinye uru na mkparịta ụka ma ọ bụ isiokwu? Ka ị na-edegharị ihe onye ọzọ kwuru ma ọ bụ isiokwu gị dabere kpamkpam na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ederede ahụ? ma ọ bụrụ na ị naghị agbakwunye uru, aga m ajụ ihe ị na-eme. Ọ bụrụ n ’n’aka nke ọzọ, na -ehota mmadụ ma ọ bụ edemede ha iji kwado echiche gị dịka ọmụmaatụ were ya. Ọ ga - eme ka ikpughewanye na isiokwu mbụ ma ọ bụrụ na onye na - ede blọgụ na ajụjụ dị n'ime ya iji nweta ego na ederede ha, nke a ga - enyere aka.
Jun 13, 2011 na 8: 28 PM
Na - agbagha okwu nke gị, Oscar… ma na - akwado nke m. Isi ihe kpatara ya bụ na ọ B NOTGH a ihe achọrọ akọwapụtara nke na-egosi ma ọ bụ na-agbagha ihe "ojiji ziri ezi" bụ n'ezie. Onu ogugu okwu enweghi ihe jikotara ya (Lee: http://www.eff.org/issues/bloggers/legal/liability/IP) Ọ bụrụ na ị na-gbara akwụkwọ… ị na-aga n'ụlọ ikpe na ọ bụ ebe ahụ ka a na-ekpebi ya. N'oge ahụ, echere m bụ na ị nọrọla oge buru ibu na ikekwe ego. Nke ahụ bụ okwu ịdọ aka ná ntị m - ndị na-ede blọgụ kwesịrị ịkpachara anya.
Jun 15, 2011 na 12: 35 PM
Dịka onye nrụpụta, ana m ahụ ụzọ a oge niile na blọọgụ ndị nrụpụta. Ndị mmepe ga-ewepu koodu na saịtị ndị dị ka Microsoft Developer Network (MSDN), tinye ya na post ha, ghara inye ntụnye maka ebe isi ahụ si wee kwuo okwu na koodu ahụ dị ka a ga-asị na ọ bụ nke ha. Ọ bụ ezie na ha anaghị ekwu hoo haa na ọ bụ ọrụ izizi, ha anaghị ekwu maka ọrụ ahụ. Nke a ga - eme ka ị chee na ọ bụ ọrụ izizi na ha nwere ikike n'okwu ahụ.
Ihe ọdịnaya a niile na-alaghachi na ihe anyị niile mụtara, ma ọ bụ kwesịrị ịmụ, na ụlọ akwụkwọ sekọndrị gbasara ịkọwa ọrụ ndị ọzọ na imebi iwu. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike iyi ihe na-adịghị njọ n’ọtụtụ ndị, ọ bụ enweghị ụkpụrụ. Ọbụna ma ọ bụrụ na akwụkwọ mmado ahụ enweta ikike iji bipụtaghachi ọdịnaya, ha ka nwere ibu ọrụ igosipụta isi mmalite ha.
Aug 29, 2011 na 7:45 PM
Jiri nnukwu mmasị gụọ akụkọ gị, echere m na ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị ikpe mara maka biputere / bipụta ọdịnaya nwebiisinka w / o ikike onye nwe ya.
BTW, na-eche, ị nwetara ikike ka ọ biputere ihe ngosi nke Bart Simpson?
Aug 29, 2011 na 9:23 PM
Ee, ị ga-ahụ ntụaka aka na eserese dị n'okpuru - ejiri ya mee ihe ma ọ bụrụhaala na enwere ederede na edemede ahụ laghachi na saịtị ha. 🙂
Ọkt 31, 2011 na 8:09 PM
Otu mmelite na nke a - ọ dị ka Righthaven nwere ike ọ gaghị ere ahịa n'oge na-adịghị anya. Ndi oru ojoo na ndi ulo ikpe n’adighi nma na eme ha n’ekele!
Ọkt 31, 2013 na 4:57 AM
Enwere m mmasị ịmara, ọ bụrụ na e depụtaghachiri ọdịnaya site na blọọgụ ọzọ na weebụsaịtị. . . na onye na - ede blọgụ na - ewe iwe, rịọ ka ewepu ọdịnaya ahụ. . . a na ewepu ihe di n’ime ya ozigbo NA ezigara mgbaghara. . . Onye na - ede blọgụ ọ nwere ikike itinye ebubo?
Daalụ, m na-atụ anya ịlaghachi azụ na gị
Ọkt 31, 2013 na 9:35 AM
Ee, Kelsey. Izu ọdịnaya zuru ohi, na-arịọ mgbaghara mgbe ejidere gị anaghị agbanwe eziokwu ahụ. Nke ahụ kwuru - Enwetụbeghị m ịchụso onye ọ bụla n'ụzọ iwu kwadoro mgbe ha wepụrụ ya.